Ikhephu elihlanganisiweyo liqhuba umsebenzi ophendulayo, othambileyo onengqwalasela engapheliyo kwiinkcukacha. Sibhanqa ubuchule ngokuchaneka ukuhambisa izisombululo ezilungiselelwe wena. Ngenxa yokuba sinenkonzo ebalaseleyo yabathengi, ukusebenza ngexesha, kunye nobuchule obunzulu be-composites, singuMgangatho weGolide kwimveliso ye-composites.
Qhagamshelana ne-Snowing composite kwiingcali ezaziyo izinto ezidibeneyo. Ukusuka kwinzululwazi yemathiriyeli ukuya kwinxalenye yoyilo kunye nokwenziwa, amaqela ethu azisa ubuchule obuvavanywe ixesha kunye namandla okuvelisa kuyo yonke iprojekthi. Sithetha ulwimi lwakho kwaye sizisa izisombululo.
Unokuthembela kwiziko lethu laseTshayina ukuba lihlala livelisa owona mgangatho uphezulu wemidibaniso. Iinjineli zethu kunye neengcaphephe zokuvelisa ziya kuvelisa iimveliso ezihlala ixesha elide kunye nezomelele kakhulu ezilodlula ukhuphiswano. Ukukwazi kwethu ukusombulula iingxaki kunye nokuvelisa izisombululo ze-turnkey kuye kwakha ubudlelwane bexesha elide kunye nabathengi behlabathi jikelele.
Icwecwe leCarbon, ICarbon Fiber Telescopic Tube, ICarbon Fiber Square Tube, I-Carbon Fiber Cue Shaft, Umbhobho weCarbon Fiber, I-Carbon Fiber Rod,